N’Golo Kante Oo Lagula Taliyey Inuu Ka Tago Chelsea Iyo Tababare Maurizio Sarri Oo Sabab U Noqonaya Bixiddiisa - Cadalool.com
N’Golo Kante Oo Lagula Taliyey Inuu Ka Tago Chelsea Iyo Tababare Maurizio Sarri Oo Sabab U Noqonaya Bixiddiisa
Xiddiga khadka dhexe ee N’Golo Kante ayaa loo soo jeediyey in dhamaadka xili ciyaareedkan uu iskaga tago kooxda Chelsea maalmo kooban kaddib markii uu qalinka ku duugay heshiis cusub oo uu lacag badan ku qaadan doono.
N’Golo Kante ayaa saamayntii uu ku lahaa Chelsea ay hoos u dhacday tan iyo markii uu yimid Jorginho xagaagii, waxaana tababare Maurizio Sarri uu booskii Kante ka ciyaari jiray istaajiyey xiddiga Talyaaniga ah, taasina waxay keentay in laacibka ku guuleystay Koobka Adduunku uu ku dhex wareego garoonka oo aanu ka ciyaarin halkii uu khibradda badan u lahaa.
27 jirkan oo ku guuleystay xiddiga sannadka ee dalka Ingiriiska, ayaa lagu tilmaamaa laacibka ugu wanaagsan dunida ee dhexda dambe ee difaaca caawisa, taas oo indhaha dunida kusoo jiitay markii uu Leicester City ka caawiyey inay horyaalka Premier League ku guuleysato iyadoon dad badan hore usii aqoonin, isla markaana uu kusii daray in Chelsea uu kula guuleystay Premier League xili ciyaareedkiisii u horreeyey.
Kulamadii xili ciyaareedkan, Sarri waxa uu saddexdiisa khadka dhexe tiir uga dhigay Jorginho oo booskii Kante ee dhexda dambe ka ciyaarsiiyey, waxaana uu hore u dhigay Kante oo uu laacib kale ku saddexeeyo, taasina waxay hoos u dhigtay qaab ciyaareedkiisa, balse Sarri naf ahaantiisa ayaa dhalleecayn ku mutaystay qaabkii uu Jorginho u ciyaaray kulankii Tottenham ee guul-darradu gaadhay.
Arrintan waxay keentay inay soo yeedhaan dhawaaqyo loosoo jeedinayo Kante oo loogu sheegayo inuu iskaga tago Blues haddii lagu soo celin waayo booskiisii uu la qabsaday, waxaana dadkii taladaas jeediyey ugu dambeeyey laacibkii hore ee Chelsea, Tony Cascarino.
“Ma filayo in faaladii uu Sarri ka bixiyey Kante ay aad ugu sallaysnayd farsamada, walaacna ay keenayso. Mawduuca ugu weyn waa in Kante la siiyey qandaraas cusub, sababtuna waa inay jireen kooxo badan oo raadinayey, laakiin waxa ku dhacday boos la’aan, waxaanad dareemaysaa in la dayacay.” Sidaas ayuu yidhi Tony Cascarino.
“Heshiiska cusub ee uu saxeexay, kuma filna inuu ka ilaaliyo Kante inuu sii joogo haddii xili ciyaareedka oo dhan uu waayo booskiisa.” Ayuu ku daray.
Sarri ayaa dhowaan sheegay in kooxdiisa ay joogaan laba ciyaartoy oo kaliya oo dhexda dambe ka ciyaara, ayna yihiin Jorginho iyo Fabregas, waxaanu liiska ka saaray Kante oo dunidu isku raacsan tahay inuu yahay laacibka ugu wanaagsan ee booskaas.